umbhali Russian M. M. Prishvin - kumbhali amanoveli eziningi futhi tindzaba letimfisha ngemvelo. Futhi, njengoba i Aivazovsky okungenakuqhathaniswa seascapes ngokubhala, ke uhlukile amakhono ayo wokubhala ubuciko echaza ubunjalo. Abafundi ukufunda umsebenzi wakhe kusukela ebangeni lesithathu futhi ukuthi ubani Prishvin. Biography izingane zingaba nkulu ngempela ezithakazelisayo, ngoba wayehamba kakhulu futhi wabona eziningi ezahlukene imvelo imihlola emangalisayo. Konke lokhu ebhala encwadini yakhe yezenzakalo zosuku, bese umkhuthaza ukuba akhiphe amathambo emvelo ukuze kwakhiwe indaba elandelayo noma inoveli. ukuphi Yingakho enjalo bafunde nangendlela engokwemvelo izithombe azichazayo. Akumangalisi Prishvina okuthiwa umculi bemvelo Russian.
Prishvin. Biography izingane
Kwazalelwa umbhali Mikhail Prishvin ngo-1873 ukuze umndeni yomthengisi edolobhaneni Khrushchev Eletski County sifundazwe orel. Ubaba wakhe washona lapho eneminyaka engu-7 ubudala, kanye Misha e unina wasala ezandleni zabantwana eziyisithupha ezengeziwe. Ekuqaleni, lo mfana iziqu esikoleni sendawo ke wafunda Elets yokuzivocavoca, kodwa wokungamlaleli uthisha wakhe waxoshwa khona.
Khona-ke waqhubeka kuyisekazi Tyumen ukuba Ignatov, ngaleso sikhathi kwaba usozimboni enkulu nokhahlo ensimini laseSiberia. Kukhona Prishvin abasha iziqu Tyumen esikoleni sangempela. Ngo 1893 engena Riga Polytechnic esiteshini chemical kwezolimo. Kusukela 1896 Prishvin abasha iqala ukuba bazibandakanye kumibuthano zezombusazwe, kaMarx ikakhulukazi, okuyiwona eboshwa ngo-1897 futhi ithunyelwa nemizana umuzi ka Elec.
Indlela lezi zincwadi
Ngo-1900, Prishvin Mihail wathumela ukufunda e-University of Leipzig eJalimane ngaleso Philosophical Faculty of umnyango Namahlathi e. Ngemva kwesikhathi esithile, waphindela eRussia futhi wasebenza njengoba isazi sezolimo esifundazweni Tula, futhi kulandelwe eMoscow sifundazwe emzini Lugano endaweni yokucwaninga uSolwazi D. Pryanishnikova ke e kaPetru Agricultural Academy. Bese waba ngunobhala enkulu Petersburg olusemthethweni, okusiza izincwadi wezolimo. Futhi kakade ngaphambi inguquko, waba yintatheli lezo zincwadi kazwelonke njengoba "iGazethi Russian", "Ekuseni Russia", "Inkulumo", "Usuku".
Esikhathini Okokuqala Umhlaba Prishvina ayiswe phambili njengoba wezokwelapha ehlelekile impi umlobeli. Ngemva Revolution-1917 , uhlanganisa ethola umsebenzi wokuba uthisha e Elets sokuzivocavoca (ngenxa ke sake axoshwe) futhi kuholela umsebenzi wendawo Lore sezolimo namahlathi. Prishvin ngisho babe amalungu Museum Manor ukuphila e Dorogobuzh, ifa yangaphambili Baryshnikov.
Creation Prishvina (dlala)
Michael Prishvin iqala umsebenzi wakhe wokubhala 1906 nendaba "Sasha". Khona-ke uyaqhubeka uhambo enqamula Russian North (Karelia) futhi ngesikhathi esifanayo matasa kakhulu nge temdzabu zendawo ethnography. Futhi kukhona futhi ngo-1907 encwadini yokuqala esihloko sithi "Kulo lelo zwe hhayi izinyoni wethukile." Kwakuyisikhathi amanothi travel, umbhali babhala imibono yakhe eminingi bemvelo ukuphila zasendle kwabantu basenyakatho. Le ncwadi-ke wamletha udumo okukhulu. Umlobi waklonyeliswa ngendondo ye-Imperial Umphakathi Geographical, futhi Waze waba ilungu zokuhlonipha. Kusukela ekuqaleni ukuthela izithelo lokusungula Prishvina. Kafushane ukubhala ngakho kulula behluleka.
omangalisayo, izindaba zayo ngobuciko njalo ngokuvumelanayo kuhlanganiswe efundisa Ukubuza, izinkondlo of imvelo, ngisho ifilosofi yemvelo. Uhlu Prishvina isebenza kukho konke ukuphila kwakhe agcwaliswa imisebenzi elikhulu kangaka ngokuthi "Ngoba magic amabhola» (1908), "Black Arab" (1910) kanye nabanye. Umlobi Prishvin matasa niche ekhethekile izincwadi itholiwe kahle ngokuya edumile Petersburg abalobi ezifana A. Block Remizov, D. Merezhkovskii. Kusukela ngo-1912 kuya ku-1914, ukukhanya livela iqoqo lokuqala imisebenzi by M. M. Prishvina imiqulu emithathu. Maxim Gorky yena ngokwakhe wanikelela kuhlobo yakhe yencwadi.
Uhlu Prishvina imisebenzi bekhula eminyakeni 1920-1930 wanyathelisa incwadi "izicathulo" yakhe, "Springs Berendey" indaba "Ginseng" nezinye imisebenzi eminingi yamandla. Into ezithakazelisayo kakhulu ukuthi uyiqonda ngokujulile ekuphileni bemvelo wenza izinganekwane zamaqhawe, njengoba banikezwa legatsha e umbhali. Tales Prishvina lyrical ngokungavamile futhi emuhle. Indlela echaza palette bokubeka ifa layo ocebile somlobi. izindaba zezingane futhi inganekwane Prishvina athwale ngokuhlakanipha ezingaphelelwa isikhathi turning ezinye izithombe ku izimpawu multi-zenani.
izindaba zezingane futhi inganekwane
Yena uhamba eziningi futhi njalo esebenza kumabhuku yakhe MM Prishvin. Umlando wakhe njengebandla impilo sesayensi nesazi sokuma komhlaba, isazi semvelo. Kodwa kuyinto ucwaningo ngezinto ezithandekayo nezijabulisayo enjalo ezizalelwe izindaba zakhe ezithakazelisayo, eziningi zazo eziye ngisho kuye yasungulwa, kodwa umane masterfully kuchazwe. Futhi ngakho angakwazi ukukwenza Prishvin kuphela. Biography izingane ethakazelisayo yokuthi abaningi izindaba zakhe futhi yezinganekwane ukuthi uzinika benza nje umfundi osemusha onesimiso phakathi ukuthuthukiswa sakhe sengqondo bangafinyelela nakho okuwusizo kusukela encwadini ofunda.
Mikhail has umbono emangalisayo. Ezinkondlweni zakhe wenza siqaphile etemibhalo okungavamile. Baningi izindaba zezingane lapho iqoqa encwadini yakhe "The Beast-Chip", "Lisichkin isinkwa" (1939). Ngo-1945 kwaba khona "Pantry ilanga" - inganekwane izingane, ngenxa izingxabano zabo kanye ukuthukwa bawela ekuxhakathisweni mshar ezimbi (emaxhaphozini), okuyinto wasindisa inja ukuzingela.
Kungani-ke kwaba umbhali uphumelele ngakho MM Prishvin? Umlando wakhe ubonisa ukuthi okuhamba phambili kwe-umsizi wakhe baba idayari, okuyinto wagcina konke ukuphila kwakhe. Nsuku zonke, wabhalela zonke, ngaleso umbhali isikhathi nevuso eliphefumulelwe, konke ukucabanga yakho ngesikhathi, mayelana zezwe kanye mayelana nomphakathi.
Waqale wabelane umbono ayenawo futhi beqonda ukuthi lokhu kuthathwe njengecala uhlanzekile ngokomoya nangokuziphatha. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, uyazazi nemiphumela ebulalayo lokhu endleleni, njengoba Mikhail wabona Bolshevism, wobushiqela engasekude ukuthi wonke umuntu elalisanda kumiswa isimo wobushiqela esongelwa nangobudlova nobudlova.
Prishvin, njengabanye abalobi abaningi Soviet, kwadingeka sivumelane, ukubathobisa futhi bacindezele morale yakhe. Kukhona ngisho ukungena ezithakazelisayo in idayari yakhe iyavuma: "ngamngcwaba bokusungula yami siqu futhi baba ngubani esenginabo."
Izimpikiswano mayelana isiko njengoba insindiso sonke isintu
Ngakho wabonisana encwadini yakhe yezenzakalo zosuku ukuthi baphile kahle kungaba kuphela ukusekela lokha lokho kubonelelwa isiko, okwakusho ukuthi ukuthembeka komunye umuntu. Ngokusho kwakhe, phakathi umphakathi kwamasiko angaphila njengoba nje kwenza ingane omdala. Wabuye ibonisa ukuthi ububele ahlobene nokuqonda - akuyona nje njalo yobuhlanga, nabakhulu ezinhle elinikwe ukuba indoda.
Januwari 3, 1920 umbhali Prishvin uchaza imizwa yakhe indlala nobumpofu, lapho eletha amandla namaSoviet. Yiqiniso, ungaphila umoya, uma ukuba ngokuzithandela uqale lesi, kodwa enye into uma wenza i ephambene ngozi intando yakho.
Umculi Russian nemvelo
Kusukela ngo-1935, futhi wenza uhambo lwakhe North umbhali Russian Prishvin. Biography izingane kungaba kakhulu. Sethula ukuba i hambo Amazing, njengoba benza umbhali ekhaliphile emikhunjini bese egibele amahhashi, futhi ngesikebhe nangezinyawo. Phakathi nalesi sikhathi ezibukela eziningi futhi ubhala. Ngemva lolu hambo wabona ukukhanya sencwadi yakhe entsha "Berendeeva ehlozini."
Phakathi umbhali Omkhulu Patriotic yena waxoshelwa ku Yaroslavl esifundeni. Ngo-1943 wabuyela eMoscow futhi wabhala izindaba "Ihlathi lehla" futhi "Phacelia". Ngo-1946, lapho uthenga mansion ezincane eMoscow Dunino, lapho isela lihlala khona ikakhulukazi ehlobo.
Phakathi nobusika 1954 Prishvin Michael ibulawa umdlavuza isisu. Yena ungcwatshwe emathuneni eMoscow ku Vvedensky.
Abazali Bazarov sika - izici kanye nendima yabo ukuphila protagonist
Indlela ukuhlanza chain isiliva masinya?
Ukufaka ubuhlalu be-Wabasaqalayo. Indlela yokulungiselela umsebenzi
Ukunakekelwa kahle-orchid ngemva yezitolo esitolo